Best Spas muNew York State
Nyika dzakabatana New York
Historic Hotels, Sophisticated Inns uye Adirondack Lodges
Nzvimbo dzeNew York ndidzo dzakanakisisa munyika. Kune nzvimbo dzakawanda dzemahotera ehotera muNew York City uko unogona kupedza husiku kana kushanyira sezuva re spa. Paunenge ubuda muguta, unogona kuwana nzvimbo dzakashata dzepasitadhi , nzvimbo dzomukati dzepasita, kunyange nzvimbo inoshandiswa mujicing. Zvose izvi zvinotapira husiku husiku, asi unogona kuwana marapirwo ezuva nezuva.
Nzvimbo Dzakakurumbira Zedhara muNew York
Mohonk Mountain House ndiyo imba yemakomo yezana remakore rechi19 iyo ine mbiri yakawanda uye yakatendeseka zvakaoma kusava murudo.
Gara pane rimwe gomo-pamusoro pegungwa uko unogona kukwira mugwagwa kana kayak, Mohonk inozivikanwa nenzira dzayo dzinofamba-famba, hurongwa hwemhuri-hukama, uye chinyorwa chechiitiko. The spa inotora musoro weVa Victori uye inoita kuti vakaroorana vaite.
Skana, The Spa paTurning Stone Resort neCasino, Verona, New York, inowanikwa kune imwe yenyika yeOneida uye naizvozvo nzvimbo ye spa inosimbisa tsika dzeNative America. Izvi zvinopa mhando dzakasiyana-siyana dzekugara, kusanganisira The Lodge, iyo yose-suite 96-hotera yekamuri, iyo Rusvingo rwemasere 19 ine makamuri 285, uye zvakadaro kusvikira pasi muRV park.
Medium-Ezed Resort Resort Spas muNew York
Gidheoni Putnam Inhara muSaratoga Springs inzvimbo yepamusoro ine 22 suites uye 120 makamuri eimba, iri mukati meSaratoga Spa State Park. Pamwe panopindwa napo ndiRosvelt Baths & Spa, uko iwe unogona kutora mvura yakawanda mumvura ine mineral iyo nzvimbo inozivikanwa kubva muzana remakore rechi19. (Kumbira kuti uone kuti unosvibiswa nemvura.) Saratoga Springs inonyanyozivikanwa muzhizha apo Saratoga Racetrack Saratoga Performing Arts Center iri kukwira uye inoshanda.
Paki yacho inewo gorofu yemakore 18.
Mirror Lake Inn Resort & Spa ine maonero akanaka eMirror Lake uye yakagadzirirwa muIngland Placid chete nzvimbo yeine diamond, iri mumoyo weAdirondacks. Iyo kirabhukiti yakachena ye-131-white-clapboard uye nzvimbo yakasvibirira-yakatsvaga ine nzvimbo yega yega kumhenderekedzo yegungwa mairi maekare manomwe anotarisa Mirror Lake; yakaderera nzvimbo yakanakisisa yekutarisa kumashure muna 1926, apo yaive yakanganisa kuunganidza kwedzimba.
Mumwe nomumwe wemakamuri anotarisana negungwa uye ane maonero. Yakaenda gore rose, uye mitambo yechando inosanganisira imbwa yakasimuka.
Whiteface Lodge ine "Great Camp" kunzwa, uye yakaratidza kuve yakakurumbira nemichato, mapoka, uye mhuri.Imba dzekugara dzichibva kumakamuri madiki kusvika kune rimwe, maviri uye matatu-makamuri ekurara, vose 94 vane zvicheni, makamuri okudyira, dryers, dzimba dzekugezera nejet-tubs nemapuranga kunze.Asi vaviri vari kutsvaga ruchiva ruchivande kana kuti boka revanasikana vanofarira spa vanogona kutsvaga munzvimbo 8,000 yakakwirira-netsoka yeAdirondack-style panzvimbo yepasi peimba yacho.
Iyo Sagamore inotangira kusvika muna 1883, apo imba yevaeni yakavakwa pakutanga pachiwi chinotaridzika maeka makumi manomwe paLake George, nzvimbo inofanirwa kuenda kunzvimbo dzezororo kumaodzanyemba kweAudrondacks. Imwe nguva, mhuri-inoshamwaridzana nemakwikwi emakwikwi egorofu, The Sagamore ine maonero akanaka emakomo, uye spa ine mwero uye salon ine zvizere zvakasiyana-siyana zverapa. Unakidzwe mumadzimba edzimba uye kunze, gungwa roga roga, migwagwa yejogger, nevekufamba-famba, bhasika, white rafting, uye kutasva mabhiza.
Intimate Inn Spas MuNew York
Spa Mirbeau iri kunze kweSkeneateles, guta rezvakaitika kare kuchamhembe kweChikepe Skeneateles, muFinger Lakes Wine Country.
Inonyatsoratidza nyika yeFrance pasina, bhere uye zvose, uye inokwanisa kuibvisa. A top gumi romantic spas.
The Copperhood Inn & Spa idiki, inoshamwaridzana yekuenda spa iyo inoratidza kuve kweEurope kuve nemudzimai wayo, Elizabeth Winograd Iwinski. Gara paEesopus Creek pedyo neShandaken, New York, ine maonero akanaka emaodzanyemba eCatskills kubva kumusana wayo. Icho chikuruwo neboka rejicing.
Emerson Resort & Spa inongova maawa mashomanana kubva kuNew York City kuchamhembe kweCatskills, kuEesopus Creek pedyo neMat. Kutya. The Emerson ndeyevanhu vakuru-inongova chete nevekushambadzira kwepamusoro makumi mana nemaviri anoshongedzwa mumutauro weIndia wakawanda, uye spa inotakura mumusoro. Kana iwe uine vana, unogona kugara pamhuri-yakagadzikana Lodge mukova.
Gara pedyo nechokupedzisira pane Long Island, Gurney's Montauk institution, ine nzvimbo shanu-nyeredzi yegungwa uye nzvimbo yepedyo America ine thalassotherapy spa.
Nzvimbo dzepaguru uye spa zvinotora nguva duku, asi dzimba dzave dzichigadziriswa mune zvakanaka maruva.
Imba yepamusoro yepaIndaneti muNew York City
The Spa paMandararin Oriental , New York inofadza, inonakidza mumatare ehofisi yepahotera panzvimbo ye 35th floor yeInguva Warner paCentral Park paColumbus Circle. Unyanzvi hwekutengesa uye vanofambisa zvakanaka munyika ndeyese yekufambisa kuenda. A top gumi romantic spas.
Dzimwe nzvimbo dzepamusoro dzepahotera muNew York City dzinosanganisira The Spa paThe Peninsula, La Prairie kuThe Ritz-Carlton, uye Vinotherapie Spa kuThe Plaza.
Uye kune nguva dzose Lenox, Massachusetts-rwendo rwuri nyore kubva kuNew York City uye rakapfuma mune spas, kusanganisira Canyon Ranch Lenox, Cranwell Resort, Spa uye Golf Club uye Kripalu Centre ye Yoga uye Health.
Nzira Yokugamuchira Nayo Mamiriro Okunze muBuffalo
Albany NY Gay Bathhouse Guide - River Street Club Troy, NY
High Peaks Resort in Lake Placid, NY
5 New York RV Mapazi Anofanira Kushanyirwa
Chikonzero Nei Rust Mabuta aBelt Anoda Kuva Pakufambisa Bhuku Rako
Kufamba Kubva kuNew York City kuenda kuHartford
Hong Kong ndezvokudya zvekutengesa zviri nani
Nzvimbo Dzakanaka Kupfuura Nzvimbo dzeEurope
Mafambiro uye Kuratidzwa Kwevatatu Vakaroorana
Madurai's Meenakshi Temple uye Nzira Yokushanyira nayo
Mazano Apamusoro Pamusoro Pokuti Ungashandisa Sei An African Tourist Visa
Mamiriro ekunze mu UK - Mamiriro ekunze mu UK Cities
Mutambo weJazlyn Jazz 2017
Vinyl Vavengi Vanotungamira kuBrooklyn
Cinémathèque Française Film Center muParis
Mabasa Emvura muSan Diego uye Kwokuita Kwazvo
Top 10 Museums muBerlin
Kwokuenda Kunotenga kuOslo, Norway